Ikhaya le-Spectacular Park elinokubukwa kwesikhumbuzo kanye neGumbi Labantu Bonke - I-Airbnb
Ikhaya le-Spectacular Park elinokubukwa kwesikhumbuzo kanye neGumbi Labantu Bonke
Washington, District of Columbia, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Michael
Ikhaya lamaphupho omndeni. Phuma ngemuva kwaleli khaya elingu-4,600-square-foot ukuze uthole ipaki elibonakala lifihliwe, kuyilapho ukusuka ku-master suite, amatshe esikhumbuzo kazwelonke kanye nepaki kuyabonakala ngokugcwele. Kunamakhishi angu-2, kanye nosofa abayingxenye ngaphakathi nakuwo womabili amadekhi akhanya kahle.
Unhosted License: 5007262201000266
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Pakisha bese ugcwala is'ganga/umbhede wosana, Umbhede omkhulu, Umshini wokuphephetha esophahleni, Umshini womoya oqandisayo
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Iskrini sekhomputha esibonisa ngokucacile, Umbhede omkhulu, Umshini womoya oqandisayo
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Umbhede omkhulu, Umshini womoya oqandisayo
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, umbhede we-queen, Umshini womoya oqandisayo
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, umbhede oyidabuli, Umshini womoya oqandisayo
Pakisha bese ugcwala is'ganga/umbhede wosana, umbhede oyidabuli, Umshini womoya oqandisayo
4.95 (izibuyekezo ezingu-19)
I-Bloomingdale ingenye yezindawo zomakhelwane ezinhle kakhulu ze-DC, futhi inikeza indawo yokudlela ephilayo. Izincomo zifaka i-Red Hen, i-Tyber Creek, ne-Pub and the People. Hamba uye kumamnyuziyamu nasezindaweni zasemadolobheni, kunemetro eseduze ukuze uhlole kabanzi.
Ibanga ukusuka e- Ronald Reagan Washington National Airport
Inombolo yepholisi: Unhosted License: 5007262201000266
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$999.